Umgangatho ophezulu woSetyenziso olunye lwe-AV Fistula Sets Sets mveliso kunye nabenzi | Sanxin
Sebenzisa iSeti enye ye-AV Fistula Sets
Usetyenziso olunye AV. Iiseti zenaliti yeFistula isetyenziselwa ukujikeleza kwegazi kunye nenkqubo yokulungisa igazi ukuqokelela igazi elivela emzimbeni womntu kwaye lidlulisele igazi okanye inkqubo yegazi ebuyiselweyo emzimbeni womntu. Iiseti zeenaliti ze-AV Fistula zisetyenzisiwe kumaziko onyango ekhaya nakwamanye amazwe amashumi eminyaka. Yimveliso evuthiweyo esetyenziswa ngokubanzi liziko leklinikhi yonyango lwe-dialysis yesigulana.
Ukusetyenziswa okukodwa kwe-AV Fistula Needle Sets kusetyenziswa ukujikeleza kwegazi kunye nenkqubo yokulungisa igazi ukuqokelela igazi emzimbeni womntu kwaye lidlulisele igazi okanye inkqubo yegazi ebuyiselweyo emzimbeni womntu. Iiseti zeenaliti ze-AV Fistula zisetyenzisiwe kumaziko onyango ekhaya nakwamanye amazwe amashumi eminyaka. Yimveliso evuthiweyo esetyenziswa ngokubanzi liziko leklinikhi yonyango lwe-dialysis yesigulana.
◆ Inaliti ecekeceke kabini etsolo ebukhali inciphisa iintlungu kunye nomonakalo wezicubu.
Isixhobo esikhuselekileyo sokukhusela ikepusi ukukhusela iatrogenic ukwenzakala okukhulu.
◆Umngxuma omva okweqanda kunye nokujikeleza kokuyilwa kwamaphiko kunokuququzelela ngokufanelekileyo uhlengahlengiso lokuhamba kwegazi kunye noxinzelelo, oluluncedo ekuhlengahlengiseni i-engile yenaliti kunye nokuqinisekisa umgangatho we-dialysis. iityhubhu
◆ I-oyile ye-abicah icutshungulwa yi-silicification yesibini.Iityhubhu zenaliti zithanjisiwe ngoqwalaselo lobuchwephesha olukhethekileyo Ukuqinisekisa ubukhali benaliti nganye, uhlolo olupheleleyo lwesikhulisi lwenziwa
◆ Ulungiso olufanelekileyo kunye nonyango olufanayo, ukunciphisa ukungahambelani kakuhle.
◆ Ngemibala eyahlukeneyo, kulula ukuchonga iimodeli zenaliti kunye neenkcukacha
Iimodeli ze-AV Fistula Sets kunye neenkcukacha:
Uhlobo oluqhelekileyo: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Uhlobo lokhuseleko: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Uhlobo lwephiko oluhleliweyo: Luhlaza okwesibhakabhaka 15G, Green 16G, Mthubi 17G, Bomvu 18G.
Uhlobo lwephiko lokujikeleza: Blue 15G, Green 16G, Yellow 17G, Red 18G.
Egqithileyo I-Hemodialysis powder (edityaniswe kumatshini)
Okulandelayo: Ipakethe ye-catheter ephambili
Ukuchithwa kwegazi nokuCocwa
Ukucocwa kwegazi emzimbeni
Unyango lokucoca igazi
Ukutyunjelwa ukuseta i-hemodialysis
Izixhobo zokuthambisa i-HDF
Umongikazi kwikhithi yoxilongo